အချစ်အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အချစ်အကြောင်း
Posted by comegyi on Oct 14, 2011 in Creative Writing, Short Story |9comments
ရေအိုင်စပ်တွင် ပါးယက်နားယက်လူးလွန့်သွေးဆာနေသော မျှော့မတစ်ကောင်ကို တီကောင်ကြီးက ရည်းစားစကားလိုက်ပြော သည်။ အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးလို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သည်ကိစ္စတွင် အမှန်တကယ် မချစ်ဘဲ ချစ်နေကြပြီး အမှန်တကယ်မချစ်ဘဲ အချစ်ကိုလက်ခံနေကြသည်မှာ များပြားလွန်းလာသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
´´မင်းကို ကိုယ်ချစ်တယ်။ ကိုယ့်ကို စဉ်းစားပေးပါ။ မင်းနဲ့ ကိုယ်က မျိုးနွယ်ချင်းလည်း နီးစပ်တာပဲနော်´´
´´ ရှင့်လို ခေါင်းမရှိ၊ ခြေမရှိကောင်မျိုးကို မစဉ်းစားဘူး´´
မျှော့မက မချစ်ဘဲနှင့် ချစ်တယ်ဟုတော့ ပြန်မပြောပါ။ အကြောင်းမှာ သည်ပြသနာတွင် သိပွံနည်းကျအပေးအယူ တည်ဆောက်မှု များပြားလာပြီး ရင်ခုန်ခြင်းနှင့် ရောမန္တိက သဘောကို သစ္စာဖောက်ခဲ့လေပြီဟု ထင်ရသည်။
တီကောင်ကြီး အသည်းကွဲသွားပါတော့သည်။ ကျွမ်းပစ်လွန့်လူးပြီးတော့ပင် အသည်းကွဲ၏။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တာပါပဲ။ တီကောင်က သွေးမှ မသောက်တတ်တာကိုး။ မျှော့မ ဆိုတဲ့အမျိုးက သွေးဆာတဲ့အမျိုး။ တီကောင်တွေက သက်သတ်လွတ်စားတဲ့ တီယဉ်ကျေးမျိုးဆိုတော့ မျှော့မ ရဲ့ ဆူပွက်နေတဲ့သွေးက ဘယ်ရင်ခုန်ပါ့မလဲ။ တီကောင်ကြီးက သူ့ဘာသာ အဖြစ်သည်းပြီး လူးလွန့်လွန်းတတ်တာ။
ဒီကိစ္စခက်တယ်။ တစ်ခါတရံ အဲဒီလို တီကောင်ကြီး ရင့်မဖြစ်လျက်နဲ့ အသည်းကွဲနေတာဟာ စိတ်ပျက်ဖွယ် ရယ်သွမ်းသွေးရလောက်အောင် လေးတွဲတွဲနဲ့။ သို့သော် အသည်းကွဲခြင်းသည် ကွန်ဆာဗတစ် ဝါဒီများကဲ့သို့ ရှိမြဲ ရှိနေချေဦးမည်ဟု အကြမ်းဖျင်းခန့် မှန်းလို့ရသည်။
ကြာတော့လည်း တီကောင်ကြီးဟာ ဖေ့ဖျောက်မရတော့လောက်အောင် စွဲလန်းလွန်းပြီး မျှောမထံသွားကာ မရဲတရဲ ထပ်မံ ဖွင့်ဟပြန်သည်။
´´ မလေးရယ် အဲဒီလိုတော့ ဂုဏ်တွေ အဆင့်အတန်းတွေ မခွဲပါနဲ့ ကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးပါ´´
´´ ဒီမှာ ရှင်နားမလည်ဘူးလား ။ ဆားတန်းကို တီမဖြတ်ချင်ပါနဲ့´´
မျှော့မ စကားကြောင့် တီကောင်ကြီး တစ်ဘဝလုံး ဆတ်စလူး ခါသွားတော့၏။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒါပါပဲ။
မှတ်ချက်။ ။ ဆားတန်းကိုတီမဖြတ်ချင်ပါနဲ့= တီမျိုးနွယ်တို့ရဲ့ ရိုးရာစကားပုံ
ဆားတန်းကို မဖြတ်ရရင်..ဝါးတန်းပဲ ဖြတ်တော့မယ်..ဗျာ..
ဆတ်ဆလူးတော့ မခါပါရစေနဲ ့..
“ စကားတစ်ခွန်းကြားရုံနဲ ့ရူးသွပ်နေမိ ” ဆိုတာကို
တွန် ့တွန် ့ဖြစ်သွားတာကို လည်း
အိုင်ဒီယာကတော. ကောင်းတယ်..အရေးအသားကို ဒီထက်ဖွဲ့နွဲ့နိုင်ရင် ပိုကောင်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အကြံပြုပါရစေ ကိုမဲ။ ဆက်လုပ်ဗျာ ….
နောက် တစ်ပတ်အကြာ တွင် ကိုယ်ဝန်သုံးလရှိနေပြီဖြစ်သော မျှော့မ လေး အဖြူရောင် ခပ်အအ ခပ်နုံနုံ အီကုတ် ဝဝကြီးဖြင့် လိုက်ပြေးသွားသည်……
အကြောင်းမှာ သူမချစ်သော အစိမ်းရောင်ရှိသည့် ငရှန် ဘောစိ ဘောက်ဖတ် မှ သူမနှင့်လက်ပွန်းတတီးနေထိုင်သော ပတ်ချွဲနပ်ချွဲ ပက်ကျိနှင့်မသင်္ကာ ဖြစ်ကာ ဘာမှတာဝန်မယူ ဟု ဗြောင်ငြင်းလိုက်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်…..
တီကောင် ဘုမသိ ဘမသိ အသဲကွဲ ပြီး အရက် သမားဖြစ် သွား သည်…..
ဆားများကား ရောင်း ကောင်းမြဲကောင်းလျက်…..
သေခါနီး လူကြီး အရွယ်မှာ~~~~~
တောတိုးပြီ ထပ်ချောင်းဘို့ မလုပ်ချင်တော့ ပါ ~~(အာ ဟာ)
ဖန်တရာတေ ကိုယ်ခံရ ဇာတ်လမ်း လေးများနဲ့ ~~
နလံ မထူ အလှံလဲ နောက်ကောက်ကြခဲ့~~
အချစ်ရဲ့ မှတ်တမ်း သက်တမ်းလဲဆုံး~~
Expired လဲ ဖြစ်~~~~~~
နောက်ဆုံးမတော့ …..မင်းနဲ့ မှ ….အမြစ်ပြတ် ပီပေါ့~~~
ဇော်ပိုင် ရဲ့ မင်းနဲ့မှချစ်တတ်ပြီပေါ့ ကိုဖွင့်
အဲဒီ စာ သားနဲ့ ဆိုကြည့်။ ဟဲဟဲ ဟဲ
ငိုစရာလား။ (ပြောတောပါ့ဘူးဟယ် ပရီမဒမ်သစ်မင်း က လာလာ ချောင်းလို့နော်)
ဆားတန်းကိုတီမဖြတ်ချင်ပါနဲ့ဆိုတာက ဝတ္ထုရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ သုံးလိုက်ရတဲ့ ဖန်တီးစကားပုံအသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါနဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံး ရေ့
ကျွန်တော်က ကိုမဲကြီး မဟုတ်ပါကြောင်း ………
ဂေဇက်အဖွဲ့ဝင် အသစ်ဖြစ်တဲ့ ကမ်းကြီး ဖြစ်ပါကြောင်းခင်ဗျားးးးးးးးးးးးးး